1.What waa furin, nooca dhibaato ay keeni laga yaabo, sida ay ku computer aad
2. Qor liiska noocyada kala duwan ee malwares
3.How in ay tirtirto malwares ka computer aad
4.Things in ay sameeyaan dib marka la tirtiro malwares
Part 1 Waa maxay furin, nooca dhibaato ay keeni laga yaabo, sida ay u heli on your computer
Furin waa code, yaadan in dhexgalay computer ah xitaa iyada oo aan oggolaansho ama aqoonta user Windows ah. Dhab ahaantii ka yimid ereyga "ulakac xun" waxaa yimaado "Mal-iib ah" hadalka iyo waxaa jira wax badan oo ka mid ah noocyada kala furin sida fayraska, trojans, kolkaasaa dirxi galay, spyware xada laga yaabaa xog xasaasi ah. Waxaa jira habab si fiican u yaqaan sida furin heli on your computer sida furitaanka ku lifaaqan ujeeddo xun ka email, degsado faylasha qaar ka mid ah oo laga helay ilo online untrusted, booqanayo websites ka shakiyaan. Oo cimrigayaga aan, waxaa jira dad badan oo si fiican u malwares ku qoran sida ay ku weerari karaan iyo idlaan antivirus aad, gaar ahaan haddii aan la cusbooneysiiyaa.
Part 2 D noocyada ifferent ee malwares
Noocyada kala duwan ee furin ayaa loo abuuray, faa'iido adigoo isticmaalaya advertising qasbay loo yaqaan adware, qaadashada xog qarsoodi ah oo xasaasi ah - spyware, loogu faafiyo email fadeexad, lacag baad ah sida ransomware. Iyadoo malwares badan oo jira, ay raaciyaa in qolooyinkii reer furin. Tusaale ahaan, Zuten waa qoys ka kooban furin in xado xogta laga kulan online, ama FakeScanti waa damiir lahayn sheeganaya inuu iskaan u furin, oo xataa waxay muujinaysaa digniin been abuur ah "barnaamijyo xaasidnimo iyo fayrusyada". Waxaa jira magacyo dhowr ah FakeScanti, sida AKM-adda, ProAV Guard Online, Windows-adda Pro, Your PC gargaaraha iyo magacyada kale ee ku lug leh wax badan oo ka mid ah dareenka. Ha ku tiirsan yihiin "antiviruses" aan la aqoon leh magacyo sofisticated. Mid ka mid ah fikrad wanaagsan yahay si loo hubiyo dalabyo ka website-ka Windows ama ka websites idman.
Qoyska kale furin waa Netsky, dixirigoodu tiro-boosto in diirada kombiyuutarada Windows oo iyaga qaadsiiyo. Fikradda asaasiga ahi waa in, ka dib markii mid ka mid user furmay lifaaqa e-mail ah oo ka kooban Netsky ah, dixiri, waxaa firfircoonaan iyo Dhibayn computer, xitaa shabakadaha la kombiyuutarada.
Si looga ilaaliyo in iska furin ka your computer, waa in aad si joogto ah u sameeyaan updates nidaamka hawl gal, waayo, antivirus, iyo wixii software dhab ah in la isticmaalo.
Part 3 Sidee in ay tirtirto malwares ka your computer
Hubinta iyo, haddii ay dhacdo, tirtirka ee malwares, waa in ay tallaabo si joogto ah u isticmaala wax Windows. Dhab ahaantii, dadka isticmaala qalabka isagoo habka hawlgalka kasta.
Mid ka mid ah qalab lacag la'aan ah oo ay ka saareen hubinta malwares waa saarista Microsoft Xaasidnimo Software Tool. Waa lacag la'aan ah, ay fududahay in la soo baxdo iyo rakibi on your computer. Waxaa loo isticmaali karaa on kombiyuutarada la Windows 7, 8, 8.1, iyo xataa 10. Sidoo kale, qoraalkii ka weyn sida Vista ama XP waxaa taageera.
Raac tallaabooyinka hoose si aad u isticmaasho saarista Microsoft Xaasidnimo Software ka Tool:
1. Tag Microsoft website oo kala soo bixi qalabka
2. Ku rakib qalab
Just raac talaabooyinka saaxir ah. Habka ugu sahlan ee isticmaalka hore waa kaliya in guji "Next" iyo qalabka eegi doonaa furin adigoo Quick baaritaan. Haddii arrinku sidaas yahay, waxaa laguu sheegi doonaa in lagu talinayaa baaritaan qoto dheer.
3. Scaning iyo tirtirka ah furin
Utility ayaa waddaa in asalka inta lagu guda jiro hubinta ee furin. Markii ugu hubinta faylasha cudurka waxaa ku xiran tahay tirada iyo baaxadda faylasha aad. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad sugto ilaa iyo inta ay u baahan tahay, maxaa yeelay tani waa talaabo aad muhiim u ah ammaanka ee computer iyo ammaanka. Marka la dhameystiro hawlaha ay, waxaad heli doontaa warbixin la malwares ogaado iyo saaro.
Soo sheeg sawirka kadib:
Qeybta 4 Waxyaabaha la sameeyo ka dib markii la tirtiro malwares
isagoo intaa ku daray in ilaalinta your computer si malwares
Shaqadaada weli ma uusan dhammayn, si ay u sii ammaanka computer ee heer sare ah. Ka dib markii iskaanka iyo tirtirka ah furin, cusboonaysiiso nidaamka aad hawlgalka iyo antivirus. In kiiska aadan ayaa antivirus ah lagu rakibay, hadda waa wakhtigii ay u isticmaalaan ah antivirus dhab ah on your computer.
iskaan u suurto gal khasaaro xogta ay sabab u tahay malwares iyo kabsado faylasha lumay (la soo kabashada xogta wondershare)
Arrintan oo uu weheliyo tirtirka ee malwares, ay timaado laga yaabaa in qaar ka mid ah sidoo kale dhibaatooyin ka, sida khasaaro xogta. Si aad u xaqiijiso in aad computer ku jiraa xaalad fiican, sameeyaan baaritaan u suurto gal khasaaro xogta. Haddii arrinku sidaas yahay, Wondershare Data Recovery bogsan doonaan faylasha lumay ka gaareen sawirka.
Messages dhoofinta Text ka Android inay computer u kaabta
3 Siyaabaha Delete aad iPhone Xiriir
> Resource > masixi > Talaabada hagitaan talaabo talaabo si ay u tirtirto malwares / fayrusyada ka your computer